Mubvunzo: Ko Imwe Cycle yeTesttosterone Ichakukuvadza - BikeHike
QA & Ongororo
Kutasva uye Utano
Shandura fomu yekutsvaga
Mubvunzo: Ko Imwe Cycle yeTesttosterone Ichakukuvadza
Zvinotora nguva yakareba sei kuti uwanezve kubva ku testosterone cycle?
Zvinotora nguva yakareba sei kuti testosterone steroids ipinde mukati?
Ndinofanira kumirira kwenguva yakareba sei pakati pemataundi?
Kuita bonhora kunoderedza testosterone?
Chii chinoitika kana ndikarega kutora testosterone?
TRT inopfupisa hupenyu hwako here?
Ndeipi nguva yakanakisa yezuva yekubaya testosterone?
Ndeapi masteroids anotora bodybuilders?
Testosterone is steroid here?
Kubudisa urume kunoita kuti ushaye simba here?
Ndezvipi zvakanakira kusaita bonyora?
Ndezvipi zvinokonzerwa ne testosterone yakawandisa?
Mapiritsi e testosterone akaipa here?
Vanhu vane testosterone yakakwirira vanorarama kwenguva yakareba here?
Zvakanaka here kuti murume atore testosterone?
Makore mangani aunogona kugara paTRT?
1 ml ye testosterone yakawanda here?
Zvinotora nguva yakareba sei kuti testosterone shots itange kushanda?
Unogona kuwandisa pane testosterone shots?
Ndeipi steroid yakachengeteka yekuvaka tsandanyama?
Chii chinonzi steroid yakasimba?
Ndeipi steroid yakanakisisa yehuwandu?
Unogona kupinza testosterone mumabhora ako here?
Ko testosterone boosters yakachengeteka here?
Vanenge vese varume vaive ne testosterone concentrations inodzokera kune yakajairwa mwedzi mitatu mushure mekupera kwekutenderera, uye 100% nemwedzi gumi nemiviri, zvichipa ivo vaine yakajairika gonadal basa pakutanga kwechidzidzo.
Results. Mhedzisiro pakufarira zvepabonde inoonekwa mushure memavhiki e3 achikwira pamavhiki matanhatu, pasina kumwe kuwedzera kunotarisirwa kupfuura. Shanduko dzema erections/ejaculations zvingada kusvika kumwedzi mitanhatu. Mhedzisiro pamhando yehupenyu inooneka mukati memavhiki 6-6, asi mabhenefiti akawanda anotora nguva yakareba.
Kupatsanurana Pakati PemaCycles Izvi zvinoreva kumirira masvondo mana kusvika matanhatu mushure mekutamiswa kwe embryo uye kuongororwa kuti pamuviri pasina nhumbu itange kumwe kutenderera kuzere kuvakadzi vazhinji. Kuita izvi kakawanda mumutsara kunonzi kuve nekudzokera kumashure IVF mitsetse. Kana matenderedzwa ari kure kure, anogona kunzi akanonoka.
Vanhu vazhinji vanotenda kuti kuita bonhora kunokanganisa mazinga emurume we testosterone, asi izvi hazvisi zvechokwadi. Kuita bonhora hakuite kunge kune chero kwenguva refu mhedzisiro pamazinga e testosterone.
Kana wakashandisa testosterone yakawandisa, kumisa mushonga kunogona kukonzera kusingafadzi kuregera zviratidzo, zvakadai sekuora mwoyo, kuneta, kutsamwa, kurasikirwa kwechido, matambudziko ekurara, kana kuderera libido.
Matambudziko emwoyo ane chekuita neTRT akajekeswa neongororo dzechangobva kuitika dzinoratidza kuti kurapa kwakabatana nekuwedzera kwakajeka kweserum testosterone mazinga kusvika kune yakajairika huwandu hwakabatana nekuderedzwa kwese-kukonzeresa kufa.
Sechivanhu, ari mangwanani. Hazvisi zvesayenzi zvakakosha kuisa testosterone mangwanani, kunyange zvazvo testosterone yedu iri pamatunhu akakwirira mangwanani.
Heino runyoro rwemamwe akajairika anabolic steroids anotorwa nhasi: anadrol, oxandrin, dianabol, winstrol, deca-durabolin, uye equipoise.
Anabolic steroids The main anabolic steroid hormone inogadzirwa nemuviri wako ndeye testosterone. Testosterone ine miviri mikuru mhedzisiro pamuviri wako: Anabolic mhedzisiro inokurudzira kuvaka tsandanyama. Androgenic mhedzisiro inokonzera hunhu hwechirume, hwakadai sebvudzi rechiso uye nezwi rakadzika.
Bonhora Inokonzera Utera Here? HERE, Bonhora harikonzeri kushaya simba. Prolactin hormone inoburitswa panguva yebonhora uye sechidzidzo cheProlactin inogona kukanganisa kurara, zvichikuita kuti unzwe wakaneta uye hope. Chokwadi chinonakidza, vanhu vazhinji vanotoita bonhora kuti vavabatsire kurara uye kuderedza kushushikana.
Kurega kubuda ejaculate kwemazuva mashoma kunogona kuwedzera testosterone uye kunatsiridza kunaka kwembeu. Nekudaro, hapana tsvakiridzo yekutsigira zvimwe zvirevo zvine chekuita nekusaita bonhora. Vanamazvikokota vakawanda vanobvuma kuti bonhora chinhu chine utano uye chinokosha pakukura kwepabonde.
Varume vane mazinga akanyanya e testosterone vanogona kusangana: mburwa. hukasha kana hunhu hwekuisa njodzi. bvudzi remuviri rakawandisa. kutemwa nemusoro. matambudziko emwoyo kana chiropa. high blood pressure (hypertension) high sex drive (libido) yakawedzera kuda kudya.
WEDNESDAY, Oct. 26, 2016 (HealthDay News) - Supplemental testosterone uye yakabatana anabolic-androgenic steroids (AAS) inogona kukonzera kurwisa kwemoyo, kuchinja kweunhu uye kusabereka, uye kushungurudzwa nyore nyore, US Food and Drug Administration inonyevera.
Anoti huwandu hwepamusoro hwe testosterone hune hukama nehupenyu hurefu uye kuti vanhu vanorarama kwenguva yakareba vane mazinga ari nani ehomoni.
Testosterone inokonzera kuwedzera kwemhasuru. Kuonda kwemuviri kunobatsira kudzora uremu uye kuwedzera simba. Kune varume vane testosterone yakaderera, zvidzidzo zvinoratidza kuti kurapwa kunogona kuderedza mafuta akawanda uye kuwedzera saizi yemhasuru uye simba.
Kazhinji kutaura, testosterone therapy inoramba ichirapa inoenderera mberi kwenguva refu, kana isingagumi. Sezvinei nemamiriro mazhinji asingaperi, kumisa kurapwa kunogona kuona zviratidzo zvako zvichidzoka semazinga e testosterone zvakare anowira pasi pehutano hwakanaka.
1 ml pavhiki ndeye 200 mg pavhiki ye testosterone. Iyi idhishi yekutsiva isina kuratidzwa kuwedzera kuonda misa zvakanyanya munguva pfupi. Nekudaro, kushandisa madosi epamusoro kunogonawo kuwedzera kugadzirwa kwemasero matsvuku eropa uye viscosity yeropa, saka chiremba wako anofanira kutarisa mazinga ako eropa rehematocrit.
Kurapa kweLow Testosterone Kunotanga Kushanda Rini? Kune varume vanonyorerwa testosterone kutsiva kurapwa, kazhinji zvinotora mwedzi mitatu kusvika mitanhatu kuti vashande, Farooq anodaro. "Vamwe varume vanogona kuona kuvandudzwa nekukasira, asi kuvarume vazhinji zvinotora nguva," anodaro Farooq.
Dana chiremba wako kuti akupe mirayiridzo kana iwe ukapotsa nguva yejojo ​​yako ye testosterone. Sezvo mushonga uyu uchipihwa nenyanzvi yezvehutano munzvimbo yekurapa, kuwandisa hakugone kuitika.
Testogen ndeyechokwadi testosterone booster, uye ine murwi wezvigadzirwa zvine simba, zvichiita kuti ive yakakwana, yakasikwa, uye yakachengeteka imwe nzira kune steroids. Real anabolic steroids anowanzo siyana maitiro e testosterone, saka zvine musoro kuti testosterone booster ichakubatsira iwe kuvaka tsandanyama.
Kune anopfuura zana akasiyana evanabolic steroid. Iyo androgen ine simba kwazvo ndeye testosterone (inodudzwa: tess-TOSS-tuh-rone). Kunyange zvazvo testosterone iri kunyanya ihomoni revarume rakura, miviri yevasikana inobudisa zvishoma.
Trenbolone uye Dianabol; Dianabol ndiyo steroid yekusarudza kune vanhu vari kutsvaga kuvaka zvakakomba tsandanyama munguva pfupi. Iyi steroid inozivikanwa nokuda kwesimba rayo, uye kuwedzera kune stack yako pamwe chete ne testosterone yaizosimbisa kutenderera kwako.
Kana yakanyorwa mufomu yekrimu ine yakakodzera base compound, transdermal testosterone inogona kuiswa kune scrotum. Scrotal ganda rakatetepa uye rine yakakwirira steroid permeability. Izvo zvakanyanya kukosha kudzivirira kushandisa kirimu kana gel nedoro sezvo doro rinokuvadza kune scrotal ganda hutano.
Ko testosterone supplements yakachengeteka here? Mamwe maOTC testosterone boosters angave akachengeteka kana akashandiswa zvine mwero, asi haagoni kusimudza zvachose kana kuchengetedza mazinga e testosterone. Ese mafomu eOTC testosterone boosters anopa ega ega ega njodzi dzehutano.
Mubvunzo: Yakareba Sei Testosterone Cycle
Nzira Yekutenderera Testosterone
Mubvunzo: Ndeipi Lower Testosterone
Chii chinoderedza Testosterone
Chivabvu Chikumi Beetle Hupenyu Kutenderera
Mubvunzo: Nzira Yokutenderera Testosterone Boosters
Mhinduro Yekurumidza: Unogona Kutenderera Kubva Testosterone
Mubvunzo: Unotenderera sei Testosterone
Quick Mhinduro: May Bike
Mubvunzo: Ndezvipi Zvokudya Zvakaderera Testosterone
Mhinduro Inokurumidza: Chii Chikafu Chinoderedza Testosterone
Previous Post: Mubvunzo: Sei Dombo Rokutenderera richinzi A Cycle
Next Post: Mubvunzo: Icharonga B Inokanganisa Kutenderera Kwako
Usafe Nzara Magadzirirwo eMarble anofungidzirwa
Mhinduro Yekukurumidza: Usafe Nzara Maitiro Okugadzirisa Zvivezwa zveMarble
Usafe Nzara Sei Kugadzirisa Mabhoti
Usafa nenzara Kugadzirisa Kudengenyeka
Mubvunzo: Usagadzirise Denga Ingoisa Solar Roof Pamusoro Pekare
Mhinduro Yekukurumidza: Usagadzirise Mabhuku eraibhurari
Mubvunzo: Usagadzirise Granite Pamucheto
Usatore Iwo Mashizha Kugadzirisa Ivhu
Usakurumidze Mharidzo Yemushandisi Kana Compact Repair Access Database
Mhinduro Yekukurumidza: Usabhadhara Basa Kugadzirisa Kenmore Elite Compressor
Bikehike.org Mutori wechikamu muAmazon LLC Associates Chirongwa